Home Wararka Wasiir ka tirsan Koonfur Galbeed oo geeriyooday & laftagareen oo ka hadlay
Wasiir ka tirsan Koonfur Galbeed oo geeriyooday & laftagareen oo ka hadlay
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee, marxuum Abba awow Xaaji Suufi.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay doorkii muuqday ee Marxuumka naftiisa iyo waqtigiisaba u huray u khidmeynta shacabka Koonfur Galbeed isaga oo ka soo qayb qaatay dadaalladii dib loogu dhisayay dowladnimada Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedka Koonfur galbeed xilliyo kala duwan isagoo hada ahaa Wasiir ku xigeenka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha DGKGS wuxuu kale uu ka mid ahaa Xildhibaanadii 1aad ee Baarlamaanka KGS.
“Innaa lillaahi wa Innaa Ileyhi raajicuun. Waxaan tacsi u dirayaa qoyska, ehelada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday, Alle ha u naxariistee, Marxuum Abba awow Xaaji Suufi oo ahaa Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha DGKGS.
Madaxweyne Cabdicasiis ayaa Marxuumka Alle uga baryey in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyska, qaraabada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay.
Previous articleWaa maxay ujeedka safarka Rooble ee Imaaraadka
Next articleRW Rooble oo si heer Sare ah loogu soo dhoweeyey dalka Imaaraadka Carabta
Warmurtiyeed ka soo baxay shirka Hobyo, kuna baaqaday dib u heshiisiin...
(Deg Deg) James Swan oo isugu yeeray Madaxda DG iyo DF...